Noma imuphi umuzi yesimanje inama epaki ayo amasiko nokungcebeleka, futhi edolobheni miningi kunesihlabathi izikhathi kweshumi. Zonke lezi zindawo zifana kakhulu nomunye: ngokuchichima zasemazweni, zokuhamba namabhentshi ngoba eziphumulele ugibele, nosaziwayo nasemakhonsathini ngezimpelasonto. Thina zisetshenziselwa ukushayela izingane zabo ukuze uthole sishaywe futhi ungalindeli kusuka iholide ngokuhlanganyela esinjalo nakho ezintsha. Kanti kungokunye - Uppsala Park, isikhala eyingqayizivele sokudala ngokushesha lapho wonke umuntu uzothola okuthile angayithandi.
amandla okuqondile endaweni efanele!
Ngo-2000, inhloko-dolobha esenyakatho eRussia, befika European yaseshashalazini street actress Astrid Schorn. Kuyinto lona wesifazane ngendlela emangalisayo abanamakhono umsunguli yephrojekthi Upsala Circus, injongo eyinhloko ukuqeqeshwa kanye nokuhlumelelisa izingane ezimpofu intsha. Umqondo ilula - njalo iziqhwaga Uyayobayobeka kudingeka anikeze indlela ukuqeda amandla ngokweqile. Upsala Circus, owaziwa ngokuthi "The isekisi axokozelayo", indawo lapho izingane nentsha bafundiswa isekisi ubuciko kanye ezithakazelisayo ukuchitha isikhathi. Injongo le project - ukuvusa isithakazelo futhi hlala ingane ngayinye oweza ukuqeqeshwa. Ngephutha sikholelwe Upsala Circus kwesigaba nje Acrobatic. Izingane kakhulu Ochwepheshe afanelekayo ukusebenza lapha. Phakathi ukuqeqeshwa wanginika hhayi amakhono ngokomzimba kuphela, kodwa futhi nokuba umsebenzi obalulekile ngokwengqondo. Le phrojekthi ubonisa ingane ngayinye, ukuthi impilo yakhe ezandleni zakhe futhi njalo Ungashintsha konke kube ngcono. Akunjalo kudala eSt wavula Uppsala Park - platform okudala ukuthi wonke umuntu ungavakashela. Lokhu format entsha kuyiholide umndeni, okuyinto ehlukile enhle ukuba ukuvakasha evamile kunepaki.
Chitha isikhathi izinga!
Uppsala Ipaki Petersburg -, ngaphezu kwakho konke, endaweni imikhaya, kodwa uma ufuna ukuza lapha ukhona yini nje umuntu nabangani noma wedwa. Akukho indinganiso iningi ezisemadolobheni ukuzilibazisa izindawo ezikhangayo futhi izithombe. Lesi sikhala senzelwe umsebenzi, imidlalo bezijabulisa futhi imfundo. Odokotela bengqondo emhlabeni wonke ususebenzisa nomqondo isikhathi izinga umndeni. Kusobala-ke nje: kuba nezikhathi lapho abazali nezingane benza yimbangela ejwayelekile. Isizukulwane esidala ngenkathi bacwiliswa ngokuphelele izithakazelo nokukhathazeka ingane yabo ibhekene kusukela le nqubo nemnandi. inhlangano enjalo ezokungcebeleka kunomphumela omuhle microclimate ekhaya futhi unikeza omningi imizwelo eyakhayo ukuze wonke amalungu alo.
Ezokuzijabulisa Uppsala Park
insimu yonke lesi sikhala esiyingqayizivele ihlukaniswe yaba izingxenye evumelanisiwe. Kukhona umtapo, kwezobuciko, zomculo namasimu ukudlala, emakhoneni ukuthula. Uppsala Park - indawo kungekho imikhawulo yobudala. On campus kukhona kumakhabheni ngokushintsha nokondla izingane. Leli paki linezintaba zonke izimo zabantu abakhubazekile. Lesi sikhala zokudala egcwele ubuciko izinto kanye nomklamo ezithakazelisayo isithombe-bands, lapho ngamunye ukukhethela umnandi kakhulu kuye ukwenza. Insimu elungiswe kahle, kukhona ichibi ahlanzekile, utshani, zezimbali kanye zokuhamba. Uppsala Park - yindawo lapho ungakwazi nje mnandi ukuchitha isikhathi, kodwa futhi enze isithombe sokuqala njengoba isikhumbuzo.
Imicimbi kanye umsebenzi wokudala
izivakashi zabo Uppsala Ipaki masonto onke ejabulisa izenzakalo engavamile. It elibamba nobusuku obungamashumi movie, izinsuku inganekwane, "multipikniki" Night of Museums, izenzakalo Upsala Circus, kanye ezihlukahlukene workshop nasemihlanganweni nabantu ezithakazelisayo. Uhlu Imicimbi ezayo isikhathi isheke nesimiso sokuqondisa epaki. Okuhle kunakho konke ukuthi - vakashela imicimbi kanye zonke izinhlobo umsebenzi wokudala ngokuphelele free. Ukhokha ithikithi emnyango kuphela insimu, enika ngakwesokudla ukuze uhlale ku Uppsala Ipaki emini. Imali yokungena kuphela $ 100. Kwamanye kukala inani amathikithi lilinganiselwe, futhi intengo kungashintshwa ngokuzikhethela abagqugquzeli. Ngo yamakhefi ukuzilibazisa endaweni, lapho ungakwazi ukuthenga iziphuzo kanye dinner nomndeni wonke.
Likuphi Uppsala Park?
Lokhu esiyingqayizivele umndeni ukuzijabulisa izikhungo elise ensimini ka "Polustrovo" ibhizinisi epaki. Ungathola lapha kusuka kuphi emzini ezokuthutha zomphakathi noma zangasese. Izindaba ezimnandi kubashayeli: kukhona yokupaka esikhulu. Ikheli ngqo lapho kuyinto Uppsala Park: Sverdlovsk nab.- 44. Indlela uthole khona ngo izithuthi zomphakathi? Udinga ukuthola metro station "Ploshchad Lenina". Kwaphela isigamu sehora ngaphambi kuvulwa kwepaki iqala ukuhamba ngebhasi nokuphathelene ukuthi kuthatha nawe mahhala ngqo Uppsala Park. Qaphela: Ukuze izivakashi ezifika ngemoto, emnyango sivela esitaladini Zhukova. Le ndawo ukuzilibazisa ivuliwe ngeMigqibelo, kusukela 12.00 kuya 19,00.
Izibuyekezo of Uppsala Park
Okushiwo ngabantu mayelana nale ndawo engavamile abantu asebethole kwadingeka isikhathi usivakashele? Uppsala Park (Petersburg), abantu abaningi bathanda. Namuhla kuba isikhala ehlukile wonke umuzi, okuyinto analogue abekho Petersburg. On endaweni landscaped eziningi izinto engavamile futhi ezithakazelisayo. Lesi siqiwu zokudala zikhona njalo imisebenzi emisha yobuciko emgwaqweni nesithombe zone. Kukhona njalo wobungane zokudala. Uppsala Park - yindawo lapho leli holidi abupheli. On endaweni yayo ungakwazi kalula baxhumane nomkhaya nabangane noma ukwenza amaziyo elisha lihle. Kuyini nice ikakhulukazi, ukuphathwa ucabangé zonke izidingo izivakashi nangemininingwane emincane kakhulu. Nasi indawo umphefumulo futhi umsebenzi ngamunye lapho. Uppsala Ipaki Petersburg has Izibuyekezo omuhle futhi ngenxa ezihlukahlukene kanye njalo imisebenzi. Imali entry ufanekisela. Zonke Ezokuzijabulisa Uppsala Park mahhala, eceleni ikhokhwe ukudla oda kuphela neziphuzo cafe (on the imenyu). Izivakashi eziningi kule isikhala creative ngivume ukuthi ngemva kwalokhu iholidi ukuze bahambahambe epaki evamile idolobha akafuni. Woza nomndeni wakho Uppsala Park noma abangane futhi uveze umbono wakho siqu mayelana nale ndawo.
"Lemvelo, lamehlo abantwana": zezingane umdwebo emncintiswaneni, yezandla, kwakha
Lokho kuyinto franchise
Amavithamini for nabancelisayo - zonke izimpendulo zemibuzo yabo ukudla okunempilo
Insumpa ukususwa laser noma we-nitrogen: okuyinto engcono, lapho ukwenza imiphumela Izibuyekezo